Garowe: Urur kale oo lagu dhawaaqey 30 Dec 30, 2012 - 1:28:20 PM
Inkastoo maalinka bariya galinka danbe ay ku eg tahay mudada diiwaan galinta Ururada siyaasada Puntland,hadana gudaha magalada Garoowe waxaa caawa mar kale looga dhawaaqay Urur-siyaasadeed cusub oo la yiraahdo Wadajir.
Munaasibadii lagu soo bandhigayay oo ka dhacdey Hoolka Waamo ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgarad,nabadoono caan ah iyo haween.
Urur-siyaasadeedka Wadajir waxaa gudoomiye ku meel gaar ah ka ah Cabdilaahi Xasan Maxmuud oo ku magac dheer (Spaanish) wuxuna ku sugan yahay dalka Spain.Qadka talleefoonka ayuu khudbad ku saabsan ururka iyo hadafkiisa kasoo jeediyay,wuxuna tilmaamay inay dhexda u xirteen sidii bulsahda Puntland loo gaarsiin lahaa himilooyinkeeda.
Cabdirashiid Cadi Xasan oo ah xiriiriyaha Ururka wadajir ayaa goobta kas oo jeediyay khudbad kooban oo ka hadlaya asbaabta loo yagleeyay ururkaani ,wuxuna sheegay inay tahay ka dib markii aasasayasha ay wadatashiyo badan la sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ka dib ay ku dhalatay in la sameeyo urur siyaasadeed ku loolama madaxtinada Dowlada Puntland.
"Ururka wadajir waxa uu u taagan yahay midnimada umada Puntland,wuxuna kasoo horjeedaa dhibkasta oo kusoo fooleh shacabka,wuxu sidoo kale taageersan yahay shareecada islaamka iyo dastuurka Puntland u yaala"Cabdirashiid ayaa khudbad arinkaasi ka hadlaysa ka soo jeediyay goobta.
Ka soo qayb galayaashii qaarkood oo ka hadlay munaasibada soo bandhigista Urur siyaasadeedka Wadajir ayaa tilmaamay inay ku farax san yihiin ururada siyaasada ee kusoo badanaya gobalada Puntland,waxayna ku tilmameen inay tahay horumar kusoo kordhay dalka iyo arin is-badal wayn keeni karta.
Urur-siyaasadeedka wadajir ayaa waxa uu ka qayb noqonayaa Ururada horey uga mid ahaa saaxada siyaasada ee Puntland kuwaasoo gaaraya ilaa sagaal urur.waxana markii ay diwaagelintu dhamaanto loo diyargaroobayaan tirakobka dadweynaha ka hor intan la qaban doorashada golayaasha deegaanka May2013.
Halkan ka dhageyso Warbixinta Faarax Seefle ka diyaarshey Ururkan